Wako Sosi Anoyamwa | Martech Zone
Wako Agency Anoyamwa
China, July 28, 2011 China, July 28, 2011 Douglas Karr
Nezuro, ndakataura muDetroit pamuzinda wekambani yenyika dzepasi rose ine zvikwata zvakawanda. Mharidzo yangu yaive yeawa yakareba uye yakanangana nemaitiro ekutarisa analytics zvakasiyana… kutsvaga ruzivo rwavasina kana kumboziva kuti rwuripo kana kuti rwakakanganisa sei bhizinesi ravo repamhepo. Mharidzo yacho yaive nekumwe kuongorora kwe rave uye maawa maviri mumashure, ini ndakanga ndisati ndasiya Detroit. Ini ndanga ndakagara ndichikurukura nevatungamiriri veKushambadzira kubva kumakambani akati wandei.
Tambo yakajairika yekukurukurirana yaive yekuti ivo vaisaziva kuti maturusi aripo. Imwe tambo yakajairika yaive yekuti ese makambani aive nekubatana kukuru kwazvo nemasangano emunyika neepasi rese. Ivo vaive vasina kunyanyo kufara nezve.
Agency: Iyo fakitori yekuita kana yekushandisa simba; mamiriro ekuita muchiito; chiito; chiridzwa.
Ndakabvunza kuti rudzii rwenhungamiro rwavakapihwa nemasangano avo Hapana. Ndakabvunza kana iwo maagency aive aripo pachiitiko ichi. Kwete. Ndakabvunza maitiro avakasvetukira mumakambani ekutengesa nesangano ravo. Ivo vaitofanira kukumbira mutengo. (Unogona here kufungidzira wakabata musangano wekushambadzira uye wako wega agency haapo?)
Iyi haisi yega nyaya. Muchokwadi, tinoshanda padhuze nenhamba dzinoverengeka dzevatengi vedu izvozvi uye zvinogara zvakafanana. Tinosvika pakuva chipangamazano anovimbwa nekambani, uye iyo agency inoti vanozoisa chitaurwa pamwe chete. Ivo vanovaka saiti, isu tinogadzirisa saiti. Ivo vanovatengesa pamhinduro, isu tinoishandisa nenzira kwayo. Ivo vanobhadharisa mari zhinji, isu tinobhadharisa kuti chii kukosha kwekubata kuri kukambani.
Pane musiyano wakakura pakati peanoshanda uye nekontrakta. Kana iwe uri kuita kuti chako chigadzirwa chikudziridzwe uye iri nguva-inonzwisisika chirongwa apo iyo kambani inokanda chiratidzo chekumaka muruoko rwako… hausi agency, iwe uri subcontractor. Ukasataurirana mafambiro nemikana kumutengi wako… hausi mumiriri, iwe uri mukonikoni. Kana mutengi wako ari kukufonera achibvunza nezvezvazvino maturusi kana matekinoroji… hausi mumiriri, iwe uri subcontractor.
Izwi rekuti agency rinobva pashoko rekuti agentia, iro rinobva kumagenjini. Izvi zvinoreva "kuita" or "kugadzira" or “Kuita”. Paunofunga nezveshoko, rinopa mufananidzo wevanhu vakabatanidzwa vane chiremera chekuti iwe upe zviitwa kune izvo zvinoda hunyanzvi hwavo ... ivo ruoko kana kuwedzerwa kwebhizinesi rako.
Subcontractors vanopa makotesheni. Subcontractors vanopa nguva. Subcontractors vanobhadharwa zvisinei nenjodzi. MaAgency anopa gwara, kupa zano, kupa kutarisa, kupa mhinduro… uye vanofanirwa kuve nenjodzi zvakare.
Our kambani inopa zvese zviri zviviri. Isu tinoita kondirakiti uye tinoshanda seanoshanda kune vamwe. Ndinovimba kudurura zvese subcontracting pakupedzisira, asi mapurojekiti dzimwe nguva anochengeta mwenje kuti tivatore. Isu hatiwanzo kunakidzwa nazvo, zvakadaro. Kana purojekiti yapihwa chibvumirano kwatiri, vatengi kazhinji vanoraira izvo zvinodiwa uye isu hatina nzvimbo muchibvumirano kupfuudza kana kugadzirisa tarisiro yekubatsira kwemutengi.
Sesangano, dzimwe nguva tinokakavadzana nemutengi. Dzimwe nguva tinovadzinga. Saka makambani mazhinji akajaira kuhaya makondirakiti zvekuti vanokanganwa zvazvakaita kuva nemurairidzi, mutungamiri uye mudiwa anokuudza izvo iwe vanoda kuita. Kana iwe uchida kuhwina, iwe unowana murairidzi. Kana uchingoda kuti mumwe munhu akumhanyire iwe ... usatarisira kuhwina. MaAgency anogadzira vanokunda.
Ndinotenda shoko boka ndiwo mamwe mazwi anoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yekutengesa. Ini ndinoshuvira mamwe ma agency achingozvidaidza ivo maduka. Logo zvitoro, webhusaiti mashopu, magariro enhau mashopu, mashopu evhidhiyo. Nechitoro, iwe unopinda mukati, kubhadhara uye kubuda kunze. Ehezve, chitoro hachikwanise kuraira iwo iwo mubhadharo unoitwa neanoshanda ... pamwe ndiro dambudziko!
Webtrends Apps Kufambira mberi muWebtrends Yemagariro
Zvemagariro Midhiya uye Yako Bhizinesi Kutaurirana Sarudzo